PressReader - Isolezwe: 2017-09-15 - Sehlile isibalo sabazobhala u-matric
Sehlile isibalo sabazobhala u-matric
Isolezwe - 2017-09-15 - IZINDABA - MHLENGI SHANGASE
UKUVELA kwamathuba okubhala ngoJuni kwabafundi abaneminyaka engaphezulu kuka-21 kuya phezulu nokubhala izifundo ezimbalwa kubafundi abadudulelwe kwa-matric, kungaba ngenye yezinto eyenze kwehla isibalo sabafundi abazobhala u-matric kulo nyaka.
Isibalo sabafundi abazobhala u-matric sehle cishe ngo-40 000 wabafundi uma uqhathanisa neminyaka edlule ezweni lonke.
Ngokombiko woMnyango weMfundo eyisiSekelo, bangu-636 814 abafundi abazobhala u-matric ekubeni ngonyaka odlule babengu-674 652.
KwaZulu-Natal isibalo sehle ngabafundi abangu-15 399, saba ngu-152 624, abazobhala uma uqhathanisa nabangu-169 023 ababhala ngo-2016.
Yize izibalo zehlile kodwa lesi sifundazwe sisazihola phambili uma uqhathanisa nezinye ezweni lonke.
UDkt Barney Mthembu, inhloko yezivivinyo esifundazweni, uthe maningi amathuba anikwe abafundi okubhala izivivinyo.
Uthe kunezivivinyo ezibhalwa ngoJuni ezaziwa nge-Amended Senior Certificate (ASC), imigomo yazo yokuphasa engaqinile kakhulu uma uqhathanisa nemigomo yezivivinyo ezizobhalwa ngenyanga ezayo, iNational Senior Certificate (NSC).
Uthe kwi-ASC abafundi abaneminyaka engu-21 kuya phezulu abagcina kwa-Grade 9 bayakwazi ukubhala lezi zivivinyo.
“Abano-Abet Level 4, ababhala u-matric eminyakeni edlule nabo bayakwazi ukubhala i-ASC. Abafundi abenza uGrade 11 bayakwazi ukugxumela kwi-ASC bangabhali i-NSC ngoba uyakwazi ukuhlanganisa izifundo uma sewenza isitifiketi,” kusho uMthembu.
Imiphumela ye-ASC uthe isiphumile, kulezi zivivinyo sekubhalwa izifundo ezintsha ezibhalwa kwi-NSC ezifaka ne-Life Orientation, Maths Literacy, nezinye. U-matric omdala owawufaka izifundo -Biology, Biblical Studies, nezinye awusekho.
UMthembu uthe yize bengazi ukuthi kungani izibalo zehlile kodwa kungenzeka ukuthi lokhu kungaba nomthelela.
“Okunye kunabafundi abadudulwa esilinde imiphumela yezivivinyo ezandulela ezokugcina abazibhalayo, kumanje esizobona imiphumela yazo bese sinquma ukuthi umfundi othile uyabhala noma ngeke abhale. Esifundazweni sinabafundi abangu-26 000 abadudulelwe kwa-matric ngakho asikazi kulaba ukuthi bangaki abazobhala. Kulabo abangeke bazibhale zonke izifundo, bazobhala ezinye ngoJuni ngonyaka ozayo,” kusho uMthembu.
Ezweni lonke bangu-108 742 abafundi abadudulelwe kwa-matric.
UMthembu uthe basabheka ukuthi ngabe yini eyenze kwehla izibalo zabafundi.